Uwe a na-ahụkarị nke ụmụ nwanyị Mexico, ị maara ha? | Akụkọ Njem
Tydị ụdị nke ụmụ nwanyị Mexico
Maria José Roldan | | omenala, Ebe njegharị, General, Mexico DF
Mba ọ bụla nwere nke ha Omenala na omenala ha, ihe n’enweghị mgbagha ọ bụla na-eme ka mba ọ bụla na ndị ya bụrụ ndị pụrụ iche na ndị pụrụ iche n’ụwa. Ọzọkwa, ọdịnala na ụzọ ndị mmadụ si eche echiche na-apụtakarịkwa n'ụzọ ejiji nke ọha mmadụ.
Taa, Achọrọ m ịkọrọ gị gbasara ụdị uwe ụmụ nwanyị Mexico ya mere ị ga-ahụ etu ha si eji ejiji taa na omenaala na-agbanwe uwe ha.
1 Brushfọdụ uwe a na-ada n'uwe ndị inyom Mexico na-eyikarị
2 Uwe ahụ bụ ọdịbendị nke ọdịbendị na mbubata
3 Omenala uwe nwanyị Mexico
3.2 Quechquémitl nwere
4 Uwe ejiji mexican nke ọdịnala
4.1 Uwe ejiji
Brushfọdụ uwe a na-ada n'uwe ndị inyom Mexico na-eyikarị
Enwere ọtụtụ uwe ndị a na-apụghị ịgụta ọnụ na Mexico, bụ ndị a na-ebute site na narị afọ gara aga wee pụta. Uwe ha ka na-egosi ma na-egbuke egbuke site na ọdịnala ha, ọ bụ ya mere ha ji adọrọ mmasị ndị mmadụ na ndị mba ọzọ site na imepụta agba na textures ha, na-eme uwe ndị a., ngwakọta nke usoro colonial na akara amaala nke metụtara ọdịbendị Mayan na Aztec. Ọ dịkwa mma ịkọ na ụdị uwe ndị Mexico na-abụkarị silk.
Anyị ekwuola n'oge gara aga banyere uwe nke mariachis ma ọ bụ charros. Banyere ụmụ nwanyị, uwe ejiji na mpaghara Jalisco bụ uwe sara mbara, nke nwere agba dị iche iche. N’elu elu, ejiri uwe mwụda mara mma chọọ uwe elu ya ogologo.
N'ozuzu, Uwe ọdịnala nke ụmụ nwanyị Mexico, yiri nke Jalisco, ọ bụ ezie na ọ nwere ụfọdụ ọdịiche, Dabere na mpaghara ahụ, akụkụ ahụ dị elu na-acha ọcha, nke nwere ihe ịchọ mma na akwa nke ụdị dị iche iche, dabere na mpaghara ahụ, na akụkụ dị ala bụ uwe mwụda sara mbara nke rutere ụkwụ.
Achọghị nke a n'ụdị uwe ejiji nke isi obodo Mexico DF, nke nwere mgbọrọgwụ Aztec doro anya (cheta na n'oge gara aga obodo a abụghị ihe na-erughị Tenochtitlán, isi obodo Aztec Empire).
Na mpaghara ụfọdụ dịka Colima, isi obodo Jalisco; na Aguas Calientes, tinyere ndị ọzọ, jikọtara ụfọdụ Aztec motifs na ejiji ndị e si Spain bịa. Ọ dịkwa mma ịmara na uwe ọ bụla, ha na-agbakwunye ihe nnọchianya mpaghara ahụ. Dịka ọmụmaatụ, na Colima, a na-eji ejiji nke onye nsọ nsọ Mexico, Virgin nke Guadalupe chọọ uwe ahụ mma, nke na-adịghị eme na Oaxaca mara mma ma dịrị n'otu, ebe ejiji bụ ngwakọta nke ejiji Europe na nke ọdịnala nke Ndị Aztek.
Ọzọ m ga-agwa gị ntakịrị ihe gbasara ụdị uwe ụmụ nwanyị Mexico, ị chọrọ ịmatakwu?
Uwe ahụ bụ ọdịbendị nke ọdịbendị na mbubata
Mgbe ọbịbịa nke Spanish, Iso Christianityzọ Kraịst gbasara ngwa ngwa ma taa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% nke ndị Mexico bụ ndị Katọlik. Mana ekwesighi ichefu ya na amaala obodo na ihe ndi pre-Hispanic nke mmepeanya Mayan na-aga n'ihu na ọdịnala Mexico. Ihe a niile dugara na mmepe nke otu agbụrụ dị iche iche na agbụrụ dị iche iche dị ọcha na Mexico.
Uwe ọdịnala nke Mexico bụ ngwakọta nke ọdịnala obodo na nke a na-ebubata. Mexico abụghị obere obodo ma nwee ụdị mbara ala ahụ uwe nwere ike ịdị iche dabere na ihu igwe nke ebe ahụ. Yabụ na enwere uwe dịgasị iche iche na ndị bi na Mexico nke dịgasị iche site n'otu mpaghara gaa na mpaghara.
Ọtụtụ ndị mmadụ ka nwere mmasị iyi akwa ejiri aka kpaa, enweghị ọdịiche dị iche iche nke njirimara akwa nke ụmụ amaala dị iche iche, mana imirikiti eriri ndị ahụ sitere na owu ejiri aka ma ọ bụ silk toro na mpaghara. Butterflies na floral motifs bụ ndị na-ahụkarị ma na-adọrọ anya n'ọtụtụ mpaghara.
Omenala uwe nwanyị Mexico
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịlele uwe ọdịnala Mexico maka ụmụ nwanyị, a na-ekpughe ọtụtụ ihe na uwe ejiri aka. Enwekwara njikọta nke ihe ndị dị na Europe na ụmụ amaala, nwere agba dị egwu.
Ọ bụ uwe elu na-enweghị aka. Ọ bụ uwe eji amata mmalite na ekele maka uwe a ụmụ nwanyị nwere ike ịkpa oke ma mara banyere obodo ha si pụta. The aghụghọ kwa ha nwere ike ibufe ọnọdụ alụmdi na nwunye nke onye yi ya.
A na-eji ya karịsịa dị ka uwe maka oriri ma ọ bụ oge pụrụ iche. O nwere akwa onodu uzo abuo nke ejiri akwa na obere poncho. Ha ji owu aji ma Enwere ike iji anụmanụ mechie ha, mbipụta ifuru na ihe osise. Dabere na obodo ụmụ nwanyị, quechquémitl nwere ike iji usoro dị iche iche mee.
Shawls bụ uwe na-arụ ọrụ ọtụtụ mgbe ma a na-eji owu, ajị anụ ma ọ bụ silk mee ya. Ejiri ikpuchi isi ma obu aru dika odi ka obu shawl. Ha na-eyiri uwe di iche iche nwere nkpuru di iche iche nke cha di iche iche iji mara ebe ha si.
Womenmụ nwanyị ndị na-eyighị akwa huipiles nwere ike iyi uwe nwanyị ọdịnala nke sitere na ihe azụmaahịa bụ isi. Uwe ndị a na-egosipụta mmụọ ọdịnala Mexico ma jiri akwa agba chọọ ya mma, ha nwekwara peal na lace maka ịma mma ha kachasị mma.. Ejiri owu na-ewu t-uwe elu ndị ọzọ.
Uwe ejiji mexican nke ọdịnala
Ihe ọzọ dị mkpa na uwe nwanyị Mexico bụ uwe adịghị mma. Uwe eji ejiji na-arọ nrọ nke ịbụ nke sara mbara na nke eji ụcha na-acha odo odo mara mma. A na-ejikarị ha eme ememe. Ihe kachasị mma bụ na ụdị uwe a ka nwanyị ọ bụla ga-eyi n'agbanyeghị agbanyeghị ahụ ya, ha dabara nke ọma.
N'akụkụ bụ uwe mwụda nke aha ndị ọzọ makwaara dị ka: entanglement, chincuete, petticoat, posahuanco, petticoat na ndị ọzọ. E nwere ọtụtụ ụdị nke ụmụ nwanyị Mexico nwere ike ịhọrọ, mana ma ọ họọrọ nke ọ bụla ma ọ bụ nke ọzọ ga-adaberekarị na mmalite ya na ihe masịrị ya. Womenfọdụ ụmụ nwanyị na-achọ iyi skirts na nkwonkwo ụkwụ na ndị ọzọ na ikpere.
Ndị a bụ ụfọdụ ụdị ụdị ejiji ị nwere ike ịchọta ụmụ nwanyị Mexico. Mana enwere ike ịsị na ụmụ nwanyị Mexico ndị ọzọ, na mgbakwunye na ịga n'ihu na uwe ọdịnala ma ọ bụ nke ejiji na mpaghara ha, dị ka ejiji nke oge a na-enwe ọbụna mara mma ma mara mma na-agbaso usoro ejiji ọgbara ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » omenala » Tydị ụdị nke ụmụ nwanyị Mexico
onyinyechi alicia dijo
Daalụ maka igosi foto mara mma nke ndị obodo anyị, abụ m onye na-ese ihe na achọrọ m ịnakọta nchịkọta nke kwanyere anyị ugwu
Zaghachi alicia castellanos
Ndewo, abum onye Argentine ma enwere m nwute maka okwu ahụ nkịtị, anyị niile anaghị eche otu ihe, enyela ihe dị mkpa ha kwuru, ọ dị nwute na ntorobịa anyị efuola
Enwere m mmasị na omenaala ha, nwa m nwanyị kwesịrị ime ihe maka ụbọchị america ọ họọrọ iyi akwa dị ka onye Mexico, yabụ ana m achọ ịhụ etu m ga-esi mee uwe ya.
Abụ m onye Argentine na ahụrụ m Mexico n'anya ọ bụ ezie na anaghị m eleta ya n'oge m na-akwadebe ọtụtụ ịgba egwu nke mba gị iji soro ụmụaka nọ n'ụlọ akwụkwọ ọta akara Abụ m onye nkuzi, enwere m egwu na-atọ ụtọ nke ukwuu, uwe ya mara mma yana ị na-ekwu kpam kpam na mgbọrọgwụ ya, ihe anyị ndị Argentine na-echefu oge niile na anyị na-echeta naanị maka egwu bọl World Cup !!!!!!!!
na nso nso a otu onye ikwu gara Mexico ha lọtara na-enwe obi ụtọ na ihe niile. Biko ekewala ndi Ajentina nile otu ihe nihi na abum onye Argentinans na echem na ha di iche, ana m ekele gi maka inye mgbe niile ihe di nkpa na idi nkpa site n'obi bia na mgbọrọgwụ gi.
Abụ m onye na-akụzi ịgba egwu na enwere m ike inyere gị aka. iji nweta egwu na ejiji na imewe. ọ bụrụhaala na ha na-agba ya ọsọ dị ka nke mbụ dị ka o kwere mee.
n'aka nke ọzọ, ọ dị nwute na enwere ndị Mexico amaghị Mexico. ma gini
Hahaha gwuola m ike mana iguta mkparita uka a na-ato m uto haha ​​ndi Mexico di nma, oge xD
Enwere m mmasị na ụda olu ha na-ebu n'olu ha mgbe ha na-ekwu okwu, uwe ha na-amasịkwa m n'ihi na ha dị ka artezana niile na ọ masịrị m otu ihe ahụ A ..Ọ bụ ezie na ọ ka nwere obere ozi ndị ọzọ mana ihe ngosi ahụ ka dị mma ma ugbu a ọ bụ ezie na ị kwenyeghị m na m ga-ekwu maka Mexico enwere m olileanya na m ga-eme nke ọma ma m nweta asaa hahahahahaha
Mariza Nwachukwu dijo
Ebumnuche ibe a bụ ka ndị si mba ọzọ mara ka esi eji ejiji na steeti ụfọdụ dị na Mexico na ịmara etu ụmụ amaala si eji ejiji n'oge gara aga na ugbu a. Lee ihe nwute na enwere ndị amaghị oke nke na ha amaghị iji jiri omenala ndị Mexico kpọrọ ihe. Ga-enwe obi ụtọ ịbụ onye Mexico ma nwee ọmarịcha omenaala dịka ụmụ amaala.
Nke a bn nna ejiji nke oge ochie dị ka ejiji na-agafe agafe na uwe ndị kachasị mma
A ga-ata ndị niile na-ekwu okwu ọjọọ gbasara mba ọzọ ahụhụ site na njide ejidere elekere 36 ma ọ bụ nra $ 3000
Zaghachi Windows SAR
Ọ dị ezigbo mma na ọ bụ MEXICO bụ ihe mere m ji hụ ya n'anya maka ọtụtụ mpaghara na omenala 🙂
Enwere m obi ụtọ ibi na mba dị iche iche ma ha niile mara mma maka omenala ha, ọdịnala ha, ndị mmadụ, wdg. Ma Mexico, Peru na Bolivia nwere ọdịbendị pụrụ iche, anyị anaghị ewe iwe n'ihi na anyị nọ ma anyị na-ekwu okwu n'ụzọ dị iche ma ọ bụ na anyị na-eji ejiji, ịma mma nke kọntinent anyị bụ ọdịbendị na ọdịnala buru ibu nke mba ọ bụla, Fernanda Enwere m olileanya na otu ụbọchị ị nwere ike ịga njem site na kọntinent anyị wee hụ ụdị ndị mara mma anyị bụ, ma kpọọ gị ka ị bịa Mexico, Aguascalientes.
Getzọ ise iji nwee obi ụtọ na snow na Spain
Royal Site nke Aranjuez na ubi ya mara mma